जाडोमा सेक्सको थप आनन्द कसरी लिने ? जान्नुहोस् - Everest Dainik - News from Nepal
जाडोमा सेक्सको थप आनन्द कसरी लिने ? जान्नुहोस्
एजेन्सी । कतिय मानिस जाडो महिना शुरु भएसँगै आनन्दमय सेक्सको मज्जा लिन नपाइने भयो भनेर चिन्तिन हुने गरेको सुनिन्छ । त्यसको एउटै कारण हो अत्यधिक चिसोको कारण कपडा खोलेर सेक्स गर्न नपाउनु ।
याे पनि पढ्नुस सेक्स त राति नै गर्न मनपर्छः गायिका मगर
योन जीवन सुखद् वनाउन बिच्याउनाको पनि महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ । सफा र न्यानो खालको तन्दाको प्रयोगले तपाईलाई यौन कार्यको लागी उत्प्रेरित गर्न सक्दछ । फोहोर बेडिङले तपाईको जोसमा कमि ल्याउन सक्छ यसबाट बच्नको लागी उपयुक्त स्थान तथा कपडाको प्रयोग गर्नु आवस्यक हुन्छ । यी र यस्ता महत्वपूर्ण कार्यलाई ध्यान दिने हो भने जाडो महिनामा पनि सेक्सबाट आनन्द लिन सकिन्छ ।
ट्याग्स: Jaado mausam, sex